Written by Rev. Roija. Posted in Spiritual Words
၁ ကော ၁ဝး၁၃
လူ၌ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း ကိုသာ သင်တို့သည်ခံရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော် မူသည်ဖြစ်၍ ၊ သင်တို့မခံနိုင်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ရောက်စိမ့်သောငှါ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ သင်တို့ သည် ခံနိုင်မည်အကြောင်း စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း အရာနှင့်တကွ၊ ထွက်မြောက်သော လမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်တော် မူလိမ့်မည်။
ယောဘ အကြောင်း စဉ်းစားဆင်ခြင်မိတဲ့အခါ ယောဘကို အံ့သြမိတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြေကွဲမှုတွေကို ခံနိုင်နေရတာလဲလို့ပေါ့။ ငါသာယောဘဆိုရင် ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားမိချိန် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးဟာ ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်လာပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်။ ယောဘ ဘာလို့ စုံစမ်းခြင်းတွေကိုခံ နိင်တာလဲ။
Written by Rev Cin Kim Pau. Posted in Spiritual Words
၇-၈ ထိုသို့သောသူသည် စိတ်နှစ်ခွရှိသော သူ၊ ပြုလေသမျှတို့၌ မတည်ကြည်သော သူဖြစ်၍ ၊ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်မှ တစုံတခုကို ရမည်ဟု မထင်မမှတ်စေနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါစိတ်နှစ်ခွရှိနေသောကြောင့်မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်နဲ့ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်ခြင်းမှတဆင့် သံသယစိတ်လာတတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရမည့်အစား ဖြစ်နိုင်သည် မဖြစ်နိုင်သည်ကို လူ့ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားမိတဲ့အခါ
Written by Sayama Awi Suan Huai. Posted in Spiritual Words
ထိုကြောင့်၊ ကာလအချိန်တန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကို မြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း၊ တန်ခိုးကြီးသော လက်တော်အောက်၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချကြလော့။ ၁ပေ၅း၆ )
ကျွနု်ပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်တန်ပြီ ဆိုသည့် စကားမကြာခဏ ကြားရပါသည်၊၊ သို့သော် အချိန်တန်ဖို့ရန် ကာလတစ်ခုကို အရင်ကျော်ဖြတ်ရမည်ဆိုတာ သတိထားမိဖို့ လိုအပ်ပါသည်၊၊အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်ကပင် “ ကာလ အချိန် တန်လျှင် "ဟုရေးသားထားသည်၊၊ ၎င်းကာလသည် စောင့်ရသည့်ကာလ ၊ ပေးဆပ်ရသည့်ကာလ၊ ဆုတောင်းရာကာလ ၊အဖိုးအခပေးရသည့်ကာလ၊ စိုက်ပျိုးရာကာလ စသည်ဖြင့် ကာလအမျိုးဖြစ်နိုင်သည်၊၊ထို့ပြင် ဘုရားအချိန် အတွက် သင့်ကိုပြင်ဆင်ရာ ကာလလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊၊
Written by Rev Mang Uap. Posted in Spiritual Words
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖခင်ဟာအရက်သမားဖြစ်နေတာကြောင့်အမြဲမူးနေတတ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းကြမ်းတမ်းစွာပြုမူဆက်ဆံတာကိုခံနေရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဒီလိုကြားသိခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့တော့အဖေဖြစ်သူ ဟာ မူးပြီးရမ်းနေရုံသာမက သားဖြစ်သူကိုလည်းကြမ်းတမ်းစွာရိုက်နှက်ကာ ရွာကလူတွေ အမှိုက်ပစ်တတ်တဲ့တွင်းဟောင်းကြီးတစ်ခုထဲကိုပစ်ချခဲ့တယ်။၃ရက်လုံးလုံးမှောင်နေတဲ့တွင်းကြီးထဲမှာကြောက်လွန်းလို့ နေ့ည အော်ဟစ် ငိုယိုနေခဲ့ရတယ်။ တစ်ရက်တော့ရွာသားတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်လာပြီးသူ့ကိုတွင်းထဲကနေကယ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။